BMI အကြောင်း မိဘတိုင်း သိထားသင့်သော အရာများ - Hello Sayarwon
BMI အကြောင်း မိဘတိုင်း သိထားသင့်သော အရာများ
ကလေးများ၏ ခန္ဓါကိုယ်သည် ကြီးပြင်းလာသည်နှင့် အမျှ ပြောင်းလဲလာသည်။ မိဘများသည် သူတို့ ပိန်လွန်း သို့မဟုတ် အဝလွန်ခြင်း မဖြစ်စေရန် သူတို့၏ ကိုယ်အလေးချိန်ကို သေချာ စောင့်ကြည့်သင့်သည်။ မိဘများကို ကူညီပေးနိုင် သော အသုံးအဝင်ဆုံးနှင့် လူသိအများဆုံး နည်းလမ်းတစ်ခု မှာ BMI ဖြစ်သည်။
ဤဆောင်းပါးတွင် သင့်ကလေး ကျန်းမာရေးနှင့်အညီ BMI ချပ်ကို အကောင်းဆုံး အသုံးပြု နိုင်အောင် သင်လိုအပ်သော အချက်အလက်များကို ရေးသားထားပါသည်။
ခန္ဓါကိုယ်အလေးချိန် ညွှန်းကိန်း (BMI) သည် သင်၏ အလေးချိန်နှင့် အရပ်အမြင့်ကို အခြေခံပြီး ခန္ဓါကိုယ်အဆီကို တိုင်းတာခြင်း ဖြစ်သည်။ အသက် ၂၀ နှင့် အထက် အရွယ် ရောက်ပြီးသော ယောက်ျားလေး၊ မိန်းကလေးအများစုတွင် တိုင်းသည်။ BMI သည် အထူးသဖြင့် အသက် ၂နှစ်မှစပြီး ကလေးငယ်များ၏ ခန္ဓါကိုယ်အဆီကို တိုင်းတာသော နည်းလမ်းကောင်း တစ်ခု ဖြစ်သည်။
သို့သော်လည်း ကလေးငယ်များအတွက် BMI အကြောင်း ပြောရာတွင် ၎င်းသည် အရွယ်ရောက်ပြီးသူများ နှင့် ကွဲပြားသည်။ BMI တိုင်းရာတွင် ကျန်းမာရေး ပညာရှင် သည် တိကျသော နံပါတ်များထက် percentiles များကို ပေးလိမ့် မည်။ အကြောင်းမှာ ကလေး၏ အလေးချိန်နှင့် အရပ်သည် အရွယ်ရောက်ပြီးသူများကဲ့သို့ မတိကျသော ကြောင့် ဖြစ်သည်။ သူတို့သည် ဆက်လက်ကြီးထွား နေသောကြောင့် ဖြစ်သည်။ ကလေးငယ်များတွင် BMI သည် ကိုယ်အလေးချိန်၊ အရပ် အမြင့် ထက် လိင်နှင့် အသက်အရွယ်အပေါ် မူတည်ပြီး ကွဲပြား သည်။
ကလေးငယ်များသည် အသက်ကြီးလာသောအခါ အဝလွန်နိုင်ချေ ရှိသလား ဆုံးဖြတ်ရာတွင် BMI သည် အသုံး ဝင်သည်။ ဆယ်ကျော်သက်များတွင် BMI နှင့် အဆီ ပမာဏ သည် နီးကပ်စွာ ဆက်စပ်သည်။ ဖြစ်နိုင်ချေရှိသော ကလေး များကို သတ်မှတ်ခြင်းဖြင့် ဆရာဝန်များသည် သူတို့၏ ခန္ဓါကိုယ် အဆီကို သေချာစောင့်ကြည့်နိုင်ပြီး အစားစားမှု ကို ပြောင်းလဲခြင်း၊ လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ခြင်းဖြင့် အရွယ်ရောက်သော အခါ အဝလွန်ခြင်းကို ကာကွယ်နိုင်မည် ဖြစ်သည်။
ကလေးငယ်များအတွက် BMI ကို ဘယ်လိုတွက်ချက်မလဲ။
ကလေးငယ်များအတွက် BMI တွက်ချက်ခြင်းသည် အရွယ်ရောက်ပြီးသူများတွင် တွက်ချက်သကဲ့သို့ပင် ဖြစ်သည်။ သို့သော်လည်း BMI ရလဒ်များသည် ကျန်းမာသော နှုန်းအတွင်း ရှိသလား သိရှိရန် ၎င်းတို့ကို ကလေး၏ အသက်၊ လိင်နှင့် နှိုင်းယှဉ်ရမည်။
ရလဒ်များက ဘာကို ဆိုလိုသလဲ။
ကလေး၏ အတိုင်းအတာများ သည် အသက်တူသော အခြားကလေးများနှင့် နှိုင်းယှဉ်လျှင် ဘယ်လို ရှိသည်ကို BMI percentiles များက ဖော်ပြသည်။ သို့သော်လည်း BMI သည် အတိကျဆုံး မဟုတ်ပါ။ ပျိုဖော်ဝင်ချိန်တွင် ကလေးငယ် များသည် အလွယ်တကူ ကိုယ်အလေးချိန် တက်နိုင်သည်။ ဥပမာ ကြွက်သား များစွာရှိသော ကလေးများသည် BMI အတိုင်း အတာ များနေနိုင်သည်။ အခြားတစ်ဖက်တွင် BMI percentiles နည်းသော ကလေးများသည် ခန္ဓါကိုယ် အဆီများစွာ ရှိနေနိုင် သည်။ ကိုယ်အလေးချိန်တက်မှုသည် ကလေး၏ ကျန်းမာရေး ကို အန္တရာယ်ရှိသလားသိရှိရန် ဆရာဝန်နှင့် တိုင်ပင် ဆွေးနွေး ရန်လိုသည်။
အောက်တွင် အခြေခံ percentiles အချို့နှင့် သူတို့၏ အဓိပ္ပါယ်များကို ဖော်ပြထားသည်။
၉၅ percentiles ရှိသော ကလေးများကို အဝလွန် သည်ဟု ယူဆသည်။
၈၅ မှ ၉၄ percentiles ရှိသော ကလေးများကို ကိုယ် အလေးချိန်ကျော်သည်ဟု ယူဆသည်။
၅ မှ ၈၅ percentiles ရှိသော ကလေးများသည် ကျန်းမာသော ကိုယ်အလေးချိန်အတွင်းတွင် ရှိသည်။
၅ percentiles အောက်နည်းသော ကလေးများကို ကိုယ်အလေးချိန်ကျသည်ဟု ယူဆသည်။
ဤဂဏန်းများကို သင့်ကလေး၏ ကြီးထွားမှုကို အတိအကျ ပြသော အရာများထက် အလားအလာတစ်ခုအဖြစ် မြင်ရန် အရေးကြီးသည်။ BMI အတိုင်းအတာများကို စောင့်ကြည့်ခြင်း ဖြင့် သင့်ကလေး၏ ကြီးထွားမှုသည် အသက်အရွယ်တူ အခြား ကလေးများနှင့် ယှဉ်လျှင် ပုံမှန်ဖြစ်သလားကို ပြောနိုင်သည်။ ဖွံ့ဖြိုးဆဲအဆင့်များတွင် ကျန်းမာသော ကိုယ်အလေးချိန် ထိန်းထားခြင်းသည် ကလေးများအတွက် အလွန် အရေး ပါသည်။
ထို့ကြောင့် BMI ကို မမေ့သင့်ပါ။ BMI တိုင်းရာတွင် ပုံမှန်မဟုတ်သော လက္ခဏာတွေ့ရှိပါက ဆရာဝန်အား အကြောင်းကြားပါ။
What Parents Should Know About BMI. http://www.webmd.com/parenting/raising-fit-kids/weight/kids-bmi-for-parents/ Accessed April 5, 2017
Body Mass Index (BMI) Chart. https://www.akronchildrens.org/cms/kidshealth/e5e0673bae0b30cc/mobile_index.html/ Accessed April 5, 2017
BMI (Body Mass Index). http://www.medicalnewstoday.com/info/obesity/what-is-bmi.php/ Accessed April 5, 2017